Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: January 2017
(Beknan Rabira irra)
Aartistootni Oromoo biyya alaaf keessaas gochaa diinummaa artistii Fayisa Furi irratti irra deddeebi'ee ta'aa jiru kana dhuunfaanis ta'ee gareen ni balaaleffatu jedheen amana. Qabsoon, aadaan, aartiif seenaan Oromoo wereegamaaf dadhabbii aartistoota hedduutiin sadarkaa kana gahan. Isaan kaanaaf kan akka Artist Eebbisaa Adunyaa, Halloo Daawwee, Usmaayyoo Muusaa, Nuhoo Goobanaa, Dr. Alii Birraa, Umar Suleyman, Ilfinesh Qannoo, Caalaa Bultumee, Laggasaa Abdii, Zarihuun Wadaajoo kkf kaasuu dandeenya. Artistootni Oromoo qabeenyaaf daawitii akkasumas sagalee ummata Oromoo hundaati. Riqicha tokkummaati. Kana hunda yeroo godhan akka artistoota saba ykn biyya biroo kaasetta isaanii gurguratanii osoo hin taane, qabeenyaaf humna isaanii fixatanii, hidhamaa, reebamaaf ajjeefamaati.Haata'uu malee sadarkaa har'a geenyetti gochaan gochaa woyyaaneetiin wal madaluuf deemu Artistii Oromoo Fayyisaa Furii irraatti raawaataa jira. Maqaa Oromootiin baqatee biyya namaa jiraatus, ammas ogummaa isaatiin ummata Oromoo walitti fidee tokkummaa cimsuuf waan qabuuf hin qabneen konsartii jalqabaa qopheessus harkaa fashalaaye. Inni si'a 2ffaa qopheesse ammas fashalaayeera. Gochi kuni hidda gadi fageeffatee yoo itti fuufe aartistoota Oromoo birtottis cee'ee ija keenya aartistoota Oromoo daraan diina caalaa laamshessuuf deema. Inni har'a Fayyisaa irratti ta'e boru kanneen biroo irratti ta'uu mala. Kuni immoo diigamuu saba tokkummaan isaa wereegama hedduun asi geessee, qabsoo, aadaaf aartii Oromooti. Hamileen cabuu aartistoota fida. Kanaaf gochaa akkanaa aartistii Oromoo kamiiyyuu irratti haa raawwatuu isin akka aartistootattis ta'ee ilmaan Oromoo hundi akka balaaleffataniin waamicha Oromummaati. Gochi kuni Oromoonis yoo raawwate gochaa diinummaati. Dura dhaabbachuuf balaaleffachuun dirqama ummata Oromoo hundaati.
Aartistiin argaa dhageettii ummataati.
Posted by Hasan Ismail at 10:42 AM No comments:
Posted by Hasan Ismail at 9:17 AM 2 comments:
Posted by Hasan Ismail at 2:24 PM No comments:
Posted by Hasan Ismail at 2:16 PM No comments:
Radiyoon harar sagantaan afaan oromo kan tamsaasa jalqabe ega radiyoon muqdisho baname Bara sadi booda ture bara
Radiyoon kuun ummata Oromo keessatti kabaja guddaa qabaacha ture,
Keessatu ummata hararge biratti jalatama ture.tamsaasa radiyoo harar dura radiyoo muqdishora dammaqinsa guddaa waan hortaniif ulfina guddaan
Sagantaa hordofa turan.
Keessatu sagantaan guyyaa Aladaa (sanbata guddaa) ummanni akka ajaa'ibatti eegata.
Sagantaan guyyaa aladaa dhugaa dubbachuuf hedduu bareedu turte.
Keessatu Magaala galmsooti haala yeroo sani hogaan yaadadhe Amma niin ajaa'ibaa.
Yeroo San an jollee tahullee haala jiru akka gaariitiin yaadadha.
Akkuma beekamu guyyaa aladaa mani
Barumsa tahe, dukkaanni martti cufaadha, hojjataan mootummaa tahe;
Dargaggeesi magaala sani guyyaan guyyaa boqonnaa waan taheef ammas akkuma beekamu guyyaan aladaa guyyaa
Barcaati, tanaafu yeroo aduun xiqqo orraate hamma yeroon barcaa geessuu
Marxoo hidhatanii namu Asiif Achii
Deemuun yeroo San waan akka fashina turte. Garuu namu yeroo sa'a Shan tahe
Dukkaana Mohammad baker duratti walgaha. Waani bakka tanatti beeku qabdan isiin dhalooni qubee yeroo San Radiyoon akka ammatti mana manatti hinture.tanaafu kan yeroo San radiyooti
Dhagaa guute hulaa dukkaana isa duratti
Radiyoo gad baasu Abbaa dukkaana mohammad baker ture, tanaafu namu achiiti walgaha.
Yeroo San keessati gazexeesitoonnii
Qophii bashanana san qopheesan keessa kannin yaadadhu million lama, Alifiyaa haji, milion Ayalaa ,zakariya
Ammiyee faadha. makmaaksa fi baacoon
Yeroo San achii dabraa turte yeroo dheeraa samuu keessa nama hinbaduu.
Taba gagabaaba jiddutti muziqaan yeroo San qileensara oolan keessa sirboota
Yoo Library Radio Harar keessa tahe malee sirboota bakka hedduu hinjire
mamaramtu kotu Martu tiya simalee
Naan taane caltu tiya.
- Ali birraa
jaalalti teenya tan Romiyo fi juuleet caalte.
- Ahmed khabira
obsee siirraa garaa muree
Garaa muree yaada keetu nahammeese
Garaa koo balleese.
Posted by Hasan Ismail at 4:01 PM No comments:
Posted by Hasan Ismail at 9:37 PM No comments:
Posted by Hasan Ismail at 12:19 PM No comments:
Posted by Hasan Ismail at 10:52 AM No comments:
Posted by Hasan Ismail at 7:35 AM No comments: